निवर्तमान (Nibartaman) ||: August 2013
फेसबुकमा रल्लि“दै गर्दा एकजना मित्रले टिप्पणी गरे, ‘तपाईं किन प्रचण्डको गुनगान गाएर लेख्नुहुन्छ ?’ प्रतिउत्तरमा मैले भनें, ‘मैले प्रचण्डको गुनगान गाएको होइन किन्तु प्रचण्ड अहिलेको समकालीन राजनीतिको केन्द्रमा छन् र हरेक विषयवस्तुको समाधान उनीबाट नै निसृत हुने यथार्थलाई मैले स्वीकार गरेको मात्र हो ।’ तर, मेरो उत्तरबाट ती मित्र कुनै पनि हालतमा सन्तुष्ट भएनन् र हुने कुरा पनि थिएन । किनकि उनले प्रचण्डप्रति आलोचनाको चाङ नै खडा गरेका थिए । उनले मलाई प्रचण्डको ‘चाकडी’ नै गरेको आरोप लगाए । यद्यपि उनको निश्कर्ष थियो, ‘नेपालमा पनि ह्युगो चाभेजजस्तो नेताको आवश्यकता छ, र अहिले नेपाली राजनीतिमा त्यस्तो व्यक्ति देखा परेको छैन ।’
आजको प्रसङ्गको उठान मैले तिनै फेसबुके मित्रको टिप्पणीबाट सुरु गर्ने जमर्को गरेको छु । निश्चय पनि ती मित्रले भनेझैं नेपालको प्रगति र समृद्धिको लागि ह्युगो चाभेजजस्ता चामत्कारिक व्यक्तिको जरुरी छ भन्ने कुरामा मेरो कुनै प्रकारको विमति छैन । तर, ती मित्रको प्रचण्डप्रतिको तीव्र आक्रोश र आलोचनामा भने मेरो सहमति हुन सक्तैन । ती मित्रले यो आलेख फेरिपनि पढेभने उनले मलाई प्रचण्डको ‘पिछलग्गु’ नै भन्न पनि सक्छन् । तर, यथार्थमा प्रचण्ड जति नै आलोचित र जर्बजस्त रुपमा नरुचाइएको व्यक्ति भएपनि अहिलेको समकालीन नेपाली राजनीतिमा उनी नै एकमात्र केन्द्रीय पात्र हुन् भन्दा फरक पर्दैन । आखिर अहिलेको नेपालको राजनीति तिनै प्रचण्ड वरिपरी घुमिरहेको छ । चाहेर पनि र नचाहेरै पनि यो आजको यथार्थ हो । आ“प खान रुचाउनेले आ“पको बोटको अस्तित्व स्वीकार गर्नुपर्छ कि पर्दैन ?
प्रगतिशील लेखक एवं साहित्यकार खगेन्द्र संग्रौलाले एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रचण्डको टिप्पणी गर्दै भनेका थिए, ‘मलाई सबभन्दा मन नपर्ने व्यक्ति पनि प्रचण्ड हुन् र सबैभन्दा मनपर्ने पनि उनी नै हुन् ।’ हो, अहिलेको समकालीन नेपाली राजनीतिमा प्रचण्ड मन नपरे पनि मन पार्नुपर्ने पात्रको रुपमा उदाएका छन् । वास्तवमा संविधानसभाको निर्वाचनबाट ठूलो शक्तिको रुपमा उदाएको एकीकृत माओवादी र त्यसका अध्यक्ष प्रचण्ड समकालीन राजनीतिमा एउटा चामत्कारिक व्यक्तित्व भने पक्कै पनि हो । माओवादी शान्तिप्रक्रियामा आएदेखि अहिलेसम्मको प्रचण्डको भूमिका कतिपय अवस्थामा आलोचनात्मक देखिए तापनि ‘मेनस्ट्रिम पोलिटिक्स’ उनीद्वारा नै निर्दिष्ट भएको हामी पाउ“छौं । यो समकालीन नेपालको धरातलीय यथार्थ हो ।
राष्ट्रिय राजनीतिमा देखिएको अनेक खाले उल्झनदेखि अन्तर्राष्ट्रिय कुटनीति र छिमेकी मुलुकहरुस“ग गरिने कुटनीतिक वार्ता र छलफलमा उनले मिलाएको सन्तुलन र हरेक जटिल विषयवस्तुमा सहज विकल्प प्रस्तुत गर्न सक्ने खुबीकै कारण राजनीतिमा प्रचण्डको केन्द्रीय भूमिका बढेर गएको हो । त्यसो त अन्य देशमा मुलुकको नेतृत्वलाई हरेक प्राविधिक र राजनीतिक विषयवस्तुहरुमा सहि सूचना दिने र उनको कुटनीतिक भ्रमणमा सहयोग गर्ने विषयविज्ञ सम्मिलित प्राविधिक टोलीहरु नै हुन्छन्, जसले हरेक विषयवस्तुको व्याख्या र उपयुक्त प्राविधिक र वैचारिक सोलुसन प्रस्तुत गर्दछन् । तर, प्रचण्डलाई त्यस प्रकारको सहयोग गर्ने कुनै टिम छैन । उनले राष्ट्रिय राजनीति र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रस“ग गर्नुपर्ने कुटनीतिक बहस र छलफलमा केही सीमित प्राविधिक विषयवस्तुहरुमा बाहेक आफैंले त्यसको सोलुसन तयार गर्नुपर्ने परिस्थिति छ ।
यस्तो अवस्थामा पनि उनले जसरी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरुमा सन्तुलन मिलाइरहेका छन्, त्यो उनमा भएको नेतृत्वदायी भूमिकाको परिचायक नै हो । शायद, समकालीन राजनीतिज्ञहरुमा यस प्रकारको क्षमता कम भएरै उनलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतलेसमेत उच्च महत्व दिएको हुनुपर्छ । नत्र नेपालमा धेरै लेखापढा र योग्य राजनीतिज्ञहरु पनि होलान् । तर किन प्रचण्ड नै सबैको नजरमा पर्न गए त ? आखिर चीन, भारत, युरोपियन युनियनलगायतले नेपालको राजनीतिको केन्द्रमा प्रचण्डलाई राख्नुपर्ने कुनै दरकार थिएन । त्यसका लागि प्रचण्डले ‘मलाई महत्व दिनू’ भनेर कतै बिन्तीपत्र पनि हालेका होइनन् होला । त्यसकारण आम रुपमा प्रचण्ड सहज र सरल तरिकाले टिप्पणी गरिने पात्र होइनन् भन्ने बुझ्नुपर्छ । उनको ‘असमाञ्जस्य’ झैं लाग्ने बोलीकै आधारमा प्रचण्डको न्यून मूल्याङ्कन गर्नु इतिहास र यथार्थप्रतिको बिब्ल्या“टो बुझाई हुनेछ ।
एउटा कुरा के सा“चो हो भने उच्च र सभ्य राजनीतिक संस्कारको विकास हुन नसकेको हाम्रो जस्तो मुलुकका राजनीतिज्ञहरुले अरुको क्षमता अस्वीकार गर्नु कुनै नौलो कुरा भने होइन । फेरि प्रतिस्पर्धाको राजनीतिमा अन्य दलका नेताहरुलाई प्रतिस्पर्धीको बखान गर्दै हिंड्न पनि सफ्ठेरो हु“दैन । त्यसैले सकेसम्म प्रचण्डलाई खुइल्याउ“दा नै आफ्नो भविष्य देख्नेहरुले प्रचण्डलाई अनेक प्रकारका लाञ्छना लगाउने गरिरहेका छन् । प्रचण्डका कतिपय कार्यशैली र निर्णयहरु गलत होलान् । जहा“सम्म उनको जीवनशैली र व्यवाहारको प्रश्न छ, त्यहा“नेर उनी भड्किला पनि देखिन सक्छन् । जनवादी संस्कृति निर्माणको दिशामा प्रचण्डले जुन प्रकारको रचनात्मक भूमिका निर्वाह गनुपथ्र्यो त्यो उनबाट हुन सकेन ।
आखिर इरानका निवर्तमान राष्ट्रपति मुहम्मद अहमदिनेजाद राष्ट्रपति भएर पनि सामान्य कारमा यात्रा गर्थे, जहिल्यै पनि इकोनोमी क्लासको जहाजबाट यात्रा गर्ने गर्थे भने सामान्य रेल चढेर घर फर्कन्थे । अनि घरमै बनाएको रोटी खाजा खान्थे । आखिर सर्वहारा वर्गको पार्टीका अध्यक्षले पनि त्यस किसिमको व्यवहार प्रदर्शन गरेका भए राम्रो हुनेथियो । कतिपय अवस्थामा प्रचण्डलाई त्यसप्रकारको व्यवहार प्रदर्शन गर्न असहजिलो पनि भएको होला । फेरि त्यसैका आधारमा उनले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा लिएका पहलकदमी र राष्ट्रिय राजनीतिमा खेलेको केन्द्रीय भूमिकालाई नजरअन्दाज गर्नु पक्कै पनि बुद्धिमतापूर्ण हु“दैन । ठीक हो, कतिपय अवस्थामा उनी चा“डै भावुक बनेर कुराहरुलाई गोप्य राख्न सक्दैनन्, त्यो उनको कमजोरी पनि होला । तर, त्यसैलाई आधार बनाएर प्रचण्डलाई कुरा फेरिरहने व्यक्तिको रुपमा चित्रित गरिने प्रयास सही होइन ।
त्यसो त अहिलेको समकालीन नेपालमा प्रचण्ड आफैंमा एउटा अज्ञात र रहस्यमय नेतृत्वको मानक बनिसकेको छ । आखिर किन सबै विपक्षीहरु प्रचण्डकै पछि दौडिरहेका छन् ? उनीहरु किन प्रचण्डलाई पंगु बनाउने ध्याउन्नमा लागिरहेका छन् ? के प्रचण्डबाट नेपाली जनताले आशा गर्नु नै गलत हो ? के अहिलेको राजनीतिमा प्रचण्डको भूमिका छैन ? हिंसात्मक जनयुद्धमा हेलिएको एउटा विद्रोही शक्तिलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउने दिशामा प्रचण्डको योगदान छैन ? नेपालका लागि यो द्वन्द्वको सहज रुपान्तरण होइन ? यदि हो भने किन प्रचण्डको विरुद्ध भ्रामक प्रचार गरिंदैछ ? यी सबै प्रश्नहरुभित्र कतै अहिलेको परिवर्तनको प्रवाहलाई अन्यत्रै मोडेर आफ्नो पुरानो लुटको स्वर्गमा फर्कने कुत्सीत मनशाय त अभिव्यक्त भएको होइन भन्ने आशंकाले घर गर्नु कुनै नौलो कुरा होइन ।
खासमा त्यही कुत्सीत मनशायकै कारण प्रचण्डको व्यक्तित्वको ‘ब्याड माउथिङ्ग’ भइरहेको छ । वास्तवमा प्रचण्ड सारा विश्वले स्वीकारेको व्यक्तित्व हो । प्रचण्ड आफैंमा एउटा आन्दोलन र उद्वेग हो, जसमा परिवर्तनको नेतृत्व अन्तरनिहित भएको छ । अहिलेको जटिल राजनीतिक संक्रमणमा गिरिजा प्रसाद कोइरालापछिको नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने क्षमता भएको व्यक्तित्व प्रचण्ड नै हो । त्यसकारण प्रचण्डको व्यक्तित्वको उचित ढंगबाट ‘बजार व्यवस्थापन’ हुन सकेमा मात्र मुलुकको भलो हुनेछ ।
प्रचण्डलाई नानाथरी संज्ञाले सम्बोधन गरे पनि उनको विशेषता भनेको उनको जुझारुपन र उनीबाट बेलाबखत प्रवाहित हुने विचार नै मुख्य कुरा हो । यो अहिलेको वास्तविकता हो । तर, त्यही तीतो यथार्थलाई पर्दाहाल्ने काम यहा“ भइरहेको छ । त्यसो त प्रचण्ड आफैंमा गतिशील व्यक्तित्व हो र उनीस“ग हरेक समस्याका विकल्पहरु छन् । शायद धेरैभन्दा धेरै विकल्पहरु प्रस्तुत गर्दा नै उनी सबैको नजरमा ‘कुरा फेर्ने’ व्यक्तिको रुपमा जबर्जस्त चिनाइएका हुन् । तर, वास्तवमा उनले कुरा फेरेको नभई नया“ नया“ विकल्प प्रस्तुत गरेका मात्र हुन् । आखिर पुच्छर पनि त हिंड्ने गोरुकै निमोठिन्छ नि । शायद प्रचण्डप्रतिको आलोचना पनि त्यही हुन सक्छ ।
प्रचण्डले हालसालैको चीन र भारत भ्रमणका क्रममा आर्थिक विकासको मोडल र नेपालको विकासका लागि त्रिदेशीय सहकार्यको जुन कुरा गरेका छन्, नेपालको इतिहासमा कुनैपनि राजनीतिज्ञले त्यसरी नेपालको बृहत्तर हितलाई ध्यानमा राखेर कुरा गर्ने आ“ट गरेको सम्झना छैन । अहिलेको समकालीन नेपाली राजनीतिका केन्द्रीय पात्र हुन् प्रचण्ड । यदि अहिलेकै मौजुदा अवस्थालाई आधार मानेर मुलुकमा परिवर्तन हुन्छ भन्ने विश्वास गर्ने हो भने त्यो प्रचण्डकै नेतृत्वमा संभव छ । मौजुदा अवस्थामा नेपाली ‘ह्युगो चाभेज’को खोजी हुन्छ भने त्यो प्रचण्ड मै संभव देखिन्छ । यदि विश्वास नै नगर्ने हो भने त कसको के नै लाग्छ र । ती फेसबुके मित्रले यो आलेख पढ्दा फेरि पनि मलाई प्रचण्डको ‘चम्चागिरी’ गरेकै आरोप लगाउलान् । अब बोल्नेको मुखै थुन्न त कहा“ सकिन्छ र ?